Xukuumadda oo ka baaqatay inay furto jidka hormara Madaxtooyada oo ay ballanqaaday | Somaliland.Org
Xukuumadda oo ka baaqatay inay furto jidka hormara Madaxtooyada oo ay ballanqaaday
December 29, 2008	Hargeysa (Somaliland.org) – Wadada wadnaha u ah magaalada Hargeysa ee hor marta xarunta Madaxtooyada Somaliland ee oo xukuumaddu xalay sheegtay in la furayo maanta ayaan la furin, iyada oo qaar ka mid ah gaadiidka dadwaynaha oo rumaystay go’aanka xukuumadda ee furitaanka jidkan oo habeenkii xalay laga sii daayay Idaacadda Radio Hargaysa ay saaka ku khatalmeen.
Taliyaha ciidanka Booliska Somaliland Maxamed Saqadhi Dubad oo u waramayay Idaacadda Dawladda ee Radio Hargaysa xalay ayaa sheegay in maanta la furayo jidka hor mara xarunta Madaxtooyada, jidkaasi oo xidhnaa intii ka dambaysay maalintii qaraxyadu ka dhaceen magaalada Hargaysa oo haatan laga joogo muddo ku siman laba bilood.
Taliyaha Booliska Maxamed Saqadhi Dubad waxa uu sheegay in jidkaas loo furayo inay maraan baabuurta yaryar 6:00 subaxnimo ilaa 6:00 galabnimo, taas oo macnaheedu yahay in habeenkii aan la mari karin jidkaas. Waxa kale oo uu sheegay in aan la ogolaan doonin inay maraan baabuurta xamuulka qaada, isla markaana aan la ogolayn in baabuurtu ay istaagaan waddadaas inta iminka xidhan oo ah agagaarka Madaxtooyada marka la furo.
Wadada madaxtooyada ayaa ka xidhan labada dacal, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamo koofiyad cas ah iyo gaadiid tikniko ah oo aad u foojigan, kuwaasi oo ay saaka fooda is dari gaadheen qaar ka mid ah gaadiidka dadwaynaha oo filayey in la furay jidkaas, iskuna dayay in ay maraan.
Ballamaaha xukuumaddu u qaado shacabka ayaa looga bartay had iyo goor inaanay waxba ka fulin, mana aha balan qaadkani kii u horeeyay. Axmed Maxamed Saleebaan, Somaliland.org, Hargeysa.